अंशमा अल्झेको अस्मिता |
अंशमा अल्झेको अस्मिता
प्रकाशित मिति :2018-12-04 17:07:20
तीज हाम्रो चाड होइन । तर पनि यो चाड मानेर ब्रत बसेका छिमेकी दिदीबहिनीहरू सित मलाइ पनि मन्दिरमा गएर नाचगान हेर्न मन लाग्दथ्यो । त्यो तीजमा पनि म रातो सारीमा सोह्र सृंगार गरेर साथीहरुसित मन्दिर गएकी थिएँ । हामी समूहमा नाचीरहेका थियौँ । मेरो जेठानी दिदीले मेरो हात च्याप्प समातेर ग्रुपबाट बाहिर ल्याइन् ।
नाचिरहेको ठाउँबाट अत्तालिदै पर तानेपछि म अचम्मित भएँ । “कि भेले दिदी ? कथिला खिच्लीए ?” मैले आफ्नै मातृभाषामा सोधें । अँध्यारो अनुहारमा भक्कानिदै गरेको जस्तो स्वरमा जेठानीले भनिन् “पइने घर चल, निक समाचार नहि छै ।”
मैले केही सोध्न सकिन, ट्वाल्ल परेर केहीबेरसम्म जेठानीको अनुहार हेरिरहें । के नराम्रो खबर आयो भन्दै मन डरायो । अगाडि केही बोल्न सकिन, दौडिए घरतिर ।
घरबाट रुवाबासीको आवाज आएको परैबाट सुनें । पाइला झन लम्किए । घर पुगेपछि थाहा भयो एकछिन अगाडि लगाएको मेरो सिउँदोको सिन्दुर सदाका लागि पुछिएछ ।
अफिस जाँदै गरेको बेलामा मेरो श्रीमान् चढेको मोटरसाइकललाई बसले ठक्कर दिएर उहाँको घटना स्थलमै मृत्यु भएको रहेछ । श्रीमतीको लागि श्रीमानको मृत्युको खबर भन्दा नराम्रो खबर अरु के नै हुन सक्दथ्यो र ? म माथी चट्याँङ्ग खस्यो ।
भदौ महिनाको मध्यान्ह्को घामले उज्यालो बनाएको त्यो क्षण भरमै मेरोलागि औशीको निस्पट्ट अध्यारो हुन पुग्यो । आँगनमा निलो तन्नाले छोपेको श्रीमानको लासको खुट्टा मुनी पुगेर म लडे । होसमा आउँदा मलाई दलानमा गुन्द्रीमा सुताईएको रहेछ । मेरो वरिपरि गाउँभरिका महिलाहरू बसिरहेका थिए । आँखा आँगनतिर दौडाएँ, मेरो आँखाले आँगन शून्य देख्यो । मलाई मेरो श्रीमानको अन्तिम दर्शन पनि गर्न नदिइ उहाँको लास सदगद गर्न लगिसकेको रहेछ ।
बिहान म मन्दिर जान तयार हँुदै थिएँ, उहाँ अफिस जान । म सारीहरू छान्दा अलमलिएको थिए । त्यो बेला रातो सारी श्रीमानले नै रोजिदिरहनु भएको थियो । मेरो शरीरमा त्यै सारी थियो तर यो सारी लगाउ भन्ने श्रीमान् मबाट धेरै टाढा पुगिसक्नु भएछ ।
मेरो आँखाले किन किन आँगनको निलो तन्ना खोज्यो तर त्यो पनि आँगनमा थिएन । ज्यानमतीले आँगन पखाल्दै गरेको देखे । घरमा के कस्तो हावा हुन्डरी चल्यो भन्ने मेसो पनि नपाएका दुइ छोरी संकुचित भएर एक कुनामा बसेको देखें । मसित आँखा जुधेपछि दुबै छोरी दौडेर मेरो काखमा आइपुगे । बाबुको माया पनि थाहा नपाइकन बाबु गुमाएका छोरीहरूलाई अंगालोमा लिन पुगेपछि मात्र मेरो आँखाबाट आँशु खस्यो । आमा रोएको देखेर होला छोरीहरू पनि रुन थाले ।
घरै अँध्यारो कोठै सुनसान, जीन्दगी उजाड भै सकेको थियो । जति रोए पनि गएको मान्छे फर्किएन् । तोते बोलीमा छोरीहरूले बाबु खोज्दा सासै रोकिएला जस्तो भए पनि मर्ने काल मलाई आएन ।
श्रीमानको एक्सिडेन्ट गराउने बस कम्पनीले एघार लाख जरिवाना दियो । मेरै खातामा पैसा पनि जम्मा गरिदिएको थियो । तर उहाको मृत्युको दुइ महिना नपुग्दै ससुरा र जेठाजुले चेकमा सहिगर्न लगाएर त्यो पैसा लिनु भयो । घरमा सबैले मलाई छोरी सरह माया गरेको र खान लगाउन कुनै दुख्ख नभएकाले मैले पनि त्यो पैसामा लोभ देखाउन सकिन ।
जतिसुकै सम्पन्न भए पनि राँडी बुहारी घर परिवारको लागि बोझ बनिसकेकी रहिछु । धेरै पछि थाहा पाँए । पैसा लिइसकेपछि म र मेरा छोरीहरूप्रतिको व्यवहारमा परिवर्तन देखिन थाल्यो ।
मेरो श्रीमानहरू दुई भाई, उहाँ कान्छो छोरा । तराईबासी परिवारको कान्छी बुहारी म सधै ससुरा जेठाजुको अगाडि टाउकोमा सारीको पल्लु राखेर अनुहारसम्म छोपेर नै बस्नु पर्दथ्यो । यो हाम्रो संस्कार नै हो । तर जेठाजुको हाउभाउ हेर्दा भाई बितेपछि म माथी गिध्दे दृष्टि लगाउन थालेको आभास भइरहेको थियो मलाई । जेठाजु बुहारी एक अर्कासित बोल्न सम्म नबोल्ने घरभित्र कि बुहारीको कोठामा जेठाजु हवात्त पसिदिने गर्न थालिसकेका थिए ।
बिस्तारै उनी झन्झन् अव्यवहारिक हुँदै गइरहेका थिए । म एक्लै भएको ठाउँमा त उनी पुगेकै हुन्थ्ये र एकोहोरो मलाई हेरिरहन्थ्ये । उनको व्यवहारले म आफ्नै घरमा असुरक्षित महसुस गर्न थालीसकेको थिएँ ।
मलाई श्रीमान मरेको एक वर्षसम्म माइतमा जाने त के माइतीसित फोनमा कुरा गर्ने अनुमति पनि दिइएको थिएन । परिवारका अरु सदस्यले त मलाई केही हानी नै हुने जस्तो व्यवहार देखाएका थिएनन् तर जेठाजुको व्यवहारले म त्रसित हुँदै गइरहेको थिएँ । यसरी नै मैले सात महिना बिताउनै लागेको थिए ।
एक रात मस्त निन्द्राबाट कुनै आवाजले मलाई बिउँझाई दियो । ढोका ढक्ढक् भइरहेको रहेछ । यो मध्यरातमा कस्ले होला ? कतै जेठाजु त होइनन् ? मनमुटु नै हल्लियो । शंकैले पुरै शरीर काम्यो । चिटचिट पसिना आयो । बिस्तारै भने “के छे बहरा ?”
मेरो प्रश्नको जवाफ आएन । कोही केही बोलेन तर दुई तीन पल्ट फेरि पनि ढोका ढक्ढकियो । मैले ढोका खोलिन । धेरै बेरसम्म निन्द्रा नै लागेन डरले ।
“दिदी, आइ तो भैररात नहि सुत्लीए ।” बिहान भान्सामा खाना पकाउँदै गर्दा जेठानीलाई सुनाए ।
“कथिला ? कि भेले ? मन खराब भेले ?”
“नैइ , हमर कोठलीके बाहर कोहि याल रहे । केबाडि पर ठोकल आवाज सुन्लीए । डरसे सुतेल नाइ सक्लीए ।”
“तोरा भक भेल हेते, बाहरके सब चुकुल सब तो हमी लगेने रहिए । बाहरसे केवाडि खोलके के भुत एते ?”
घटना सत्य थियो । तर बाहिरकै ढोका मैले नै लगाएको भनेर जेठानीले मेरो कुरालाई निराधार बनाइदिइन् ।
हुन सक्छ म नै गलत पनि हुन सक्छु । बनको बाघले खाओस् नखाओस् मनको बाघले खान्छ भने जस्तै मेरो पनि मन डराएको हो कि । मनमनै गुने र सम्भाले डराएको आफ्नो मनलाई ।
दुईदिन पछाडि बिहानै म धारामा नुहाइरहेकी थिएँ । घरका महिलालाई नुहाउन बाँसको भाटाले बारेर कोठाजस्तो बनाइएको थियो । कताकताबाट जेठाजु आएर पछाडिबाट अंगालो नै मारे । म पेटिकोटमा बेरिएकी मात्र थिए । जेठाजुको अप्रत्यासित यो हरकतले म कहालिए । रुदै चिसै पेटिकोटमा म कोठा तिर दौडिए । अनौठो त मलाई त्यो वेला लाग्यो म त्यस्तरी कहालिदै घरभित्र पस्दा पनि घरका अरु परिवारले थाहै नपाएको जस्तो गरे । म कोठाबाटै रुदै कराउन थाले पछि सासूले आएर “जेठानी जस्तो लागेर समाएको हो रहेछ । हल्ला नगर आफ्नै बेइज्जत हुन्छ ।” उफ कसरी सम्झाउनु घर परिवारलाई !
अब त झन जेठाजु म एक्लै भएको ठाँउ र मौका कुर्न थाले । कहिले हात समाएर तान्ने त कहिले अंगालो मार्न आउने । तर घरमा देख्ने मानिस कोही नहुँदा म नै दोषी हुँदै गइरहेको थिएँ ।
गालामा चिसो भयो निन्द्राबाट बिउँझिदा अगाडि जेठाजु अनी उनकै हात मेरो गालामा । म अत्तालिएर कराउँदै बिस्तराबाट उठे । उनी फुत्त बाहिरिए । म कोठैमा कराउँदै रुन थाले । सासू र जेठानी के भयो भन्दै मेरो कोठामा आए । जेठानी र सासूले त उल्टै मेरो चरित्रमा पो औला उठाए ।
एक रात फेरि मेरो ढोका ढक्ढकियो । म चाल मारेर ढोकाको छेउमा गएर उभिएँ । “जोर से मार न बौवा । निन्याल हेते, आवाज सुन्ते तब न केबाडी खोल्ते ।” सासूको आवाज सुने । ओहो सासूलाई पनि थाहा रहेछ । आमाको स्थानमा राखेकी सासू पनि जेठाजुको व्यवहारमा सरिक रहिछन् छि । मनमा कुरा खेल्दै थियो जेठानीको आवाज आयो । “ओइ राइत तो एक्केवेरमे जाइग गेलरहे ।” ओहो परिवारका सबै सदस्य पो जेठाजुको साथमा रहेछन् । अब कुन बिश्वासले यो घरमा बस्ने होला ? दुई अबोध छोरीबाहेक को छ आफ्नु भन्ने यहाँ ? रुँदै खाटमा पल्टिए । भोलीपल्ट बिहान बारीको छेउमा भएको चर्पीमा गएर रुँदै आमालाई फोन गरे । आमा केही बोल्न सक्नु भएन । धेरै बेर म रोइसकेपछि घरमा कुरा राख्छु पिर नगर भनेर फोन काटी दिनु भयो । आफूलाई यत्रो औडाहा हुँदा पनि आमाले सामान्यरुपमा लिएको जस्तो लाग्यो । जन्मदिने आमाले पनि छोरीको आँशु नदेखेको हो कि जस्तो लाग्यो । सबै तिरबाट मेरो लागि ढोका लागेको महसुस भयो । चर्पीबाट बाहिर नै ननिस्कीएर धेरै बेर सम्म रोए । आफ्नो सुरक्षा आफै गर्दै दिन काटिरहेकी थिएँ ।
एक दिन म दिउँसो छोरीहरूलाई सुताउन आफू पनि बिस्तरामा पल्टिए । बाहिर आँगनमा धान सुकाएको थियो । त्यसैले मलाई बाहिर जानु पर्छ भन्ने लागेर ढोका ढप्काएको मात्र थिए । तर छोरीहरूलाई सुताउँदा आफू पनि निधाए छु । गालामा चिसो भयो निन्द्राबाट बिउँझिदा अगाडि जेठाजु अनी उनकै हात मेरो गालामा । म अत्तालिएर कराउँदै बिस्तराबाट उठे । उनी फुत्त बाहिरिए । म कोठैमा कराउँदै रुन थाले । सासू र जेठानी के भयो भन्दै मेरो कोठामा आए । जेठानी र सासूले त उल्टै मेरो चरित्रमा पो औला उठाए । “ओकर घरवाली तो हम अखनि तलिक जीत्ते छीए । हम अखनी तलिक छेवे करिए तोरालग कथिला जेते ? तोहर घरबाला मैर गेले तब भैसुर लग बात लग्बैछी ? ”
यति ठूलो आरोप ! सासूले पनि जेठीबुहारीको हो मा हो मिलाइन ।
मलाई त छर्लङ्ग भै हाल्यो –सबै परिवारको मिलोमतोमा जेठाजुले म माथी गिद्धे नजर लगाएका रहेछन् । तर साथ साथै प्रश्नहरूको पेटारो नै खुल्यो मनमा, आखिर किन ?
सासू र जेठानी कराउँदै कोठाबाट बाहिर निस्किएपछि ढोकाको लाग्लो लगाए । आमालाई फेरि फोन गरे । यो पल्ट दाजुले फोन उठाउनु भयो “हेलो”
दाजुको आवाज सुनेपछि म बोल्न सकिन डाको छोडेर रुन थाले ।
“तिमी कहाँ छौ अहिले ?”दाजुले सोध्नु भयो । रुदै सबै कुरा बताए ।
“हामी आउँदै छौ । तिमी छोरीहरू लिएर कोठा भित्रै बस ।” फोन काटियो । मन अलि शान्त भयो ।
दिउँसो दुई बजेतिर घर अगाडि गाडीको आवाज आयो । केहिबेरमै घरमै धेरै मानिसहरू आएजस्तो कल्याङ्गकुलुङ्ग भयो ।
मेरो ढोका फेरि ढक्ढकियो । तर मैले ढोका खोल्ने हिम्मत गर्न सकिन । “बहिनी ढोका खोल त । हामी पुलिस लिएर आएका छौँ । तिमी नडराइ ढोका खोल ।” दाजुको आवाज सुनेपछि म रुँदै ढोका खोल्न पुगे । साँच्ची नै घरभरस् पुलिस पो आएका रहेछन् । दाजु र आमा मेरो कोठा बाहिर नै देखे । रुँदै आमालाई अंगालो मार्न खोजेको सम्झना छ म त त्यही ढलेछु । होसमा आएपछि थाहा पाए । आमा र दाजुले सदरमुकाम आएर वकिलको सहायता लिनु भएको रहेछ । वकिलकै सहायताबाट पुलिस घरमा आएका रहेछन् । वकिलले आफ्नो पेसा गरेका होलान् तर म कलियुगकी द्रोपदीको लागि त्यो बेला तिनै भगवान कृष्ण भएर आए । होसमा आएपछि पुलिसले मेरो बयान लियो । जेठाजु, सासू र जेठानीलाई मेरै बयानको आधारमा पुलिसले गाडीमा हाल्यो ।
“तिम्रो र भान्जीहरूको सामान बाँध । अब यहा हामी तिमीलाई छोड्दैनौ ।”
सम्पत्तिको लागि मानिस कतिसम्म गिर्दो रहेछ । भाइ बाँचुन्जेल सिधा भएर हेर्न पनि नसक्ने जेठाजुको यो कस्तो नरपिचास रुप ? सबै कुरा सुनिसकेपछि पुलिसको अगाडि रुँदै भने “म त अरुको छोरी थिए माया लागेन होला तर यी अबोध छोरीको के दोष जसको आमालाई नै सिध्याउँने सुरमा उनीहरूको ठूलो बुवा लागेछ । टुहुरा छोरीको समेत माया नगर्ने यो परिवारलाई केसम्मको सजाय दिनसक्नु हुन्छ सबै दिनु ।” यती भनेर म पुलीस चौकीबाट बाहिरिएर समीको बोटमुनिको चौतारामा आएर बसे । आमा र छोरीहरू पनि त्यही आएर बसे । झण्डै दुइ घन्टा पछाडि मात्र दाजु र वकिलहरू बाहिरिए ।
मैले मेरो र छोरीहरूको चाहिने जति सामान बाकसमा भरे । दाजुले बाकस बोकेर बाटोतिर लाग्नु भयो । आमाले नातिनीहरू समाएर हिँडेपछि म पनि पछि पछि लाँगे । आँगनमा ससुरा टाउकोमा हात राखेर टुक्रुक्क बसेको देखेँ । घर अगाडि छिमेकीको भिँड थियो । ससुरासित आँखा जुधे तर केही नबोली म बाटो लाँगे । सफारी रिक्सामा बसेर हामी पुलिस चौकी नै पुग्यौ ।
पुलिस चौकीमा पुगेपछि जेठाजुले दिएको बयानले मलाई छाँगाबाट खसायो । भाइ मरेपछि बुहारीलाई अंश दिनु नपरोस् भनेर म माथी अत्याचार गरेको रहेछ । या त बुहारी समर्पणमा आँउछे या इज्जत जोगाउँन घर छोडेर जान्छे भनेर परिवारकै सल्लाहमा जेठाजुले त्यस्तो घिनलाग्दो कदम चालेको रहेछ ।
त्यो दिन हामी त्यही होटेलमा बस्यौँ । भोलीपल्ट वकिल र दाजुको सहायतामा मैले अंश मुद्दा हाले ।
अहिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । मैले अंश पाउने निश्चित नै छ भन्नु भएको छ वकिलले । एसएलसी पास गरेकी थिएँ । त्यै सर्टिफिकेटको आधारमा माइती गाँउकै एउटा निजी बिद्यालयमा पढाउन थालेकी छु । दाजुले सदरमुकाममा बसेर उच्च शिक्षा हासिल गर भन्नु भएको छ । विवाह पश्चातको जीवन कस्तोसम्म हुने रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेकीले दाजुको भनाइमा सहमत भै सकेकी छु । छोरीहरूको उज्वल भविष्य बनाउने सोचमा आत्मनिर्भर भएर बाँकी जिवन बिताउने अठोट लिएकी छु ।